Zimbabwe Yokurudzirwa Kukoshesha Bazi reHutano
Ndira 30, 2021
Parirenyatwa Hospital Ventilators1
Sangano revakoti re Zimbabwe Nurses Association, riri kukurudzira hurumende kuti iise zvikwanisiro muzvipatara zvayo, kuitira kuti vana chiremba nevakoti, vakwanise kuita basa ravo nemazvo sezvo zvipatara zvehurumende zviri kuwandirwa nevarwere veCovid-19.
Mashoko ari kuburitswa nemasangano enhau anoti zvipatara zvehurumende zvine mavhindereta makumi masere nemana ari kunyatsoshanda zvakanaka, uye pane mibhedha chiuru nemakumi mana nemipfumbamwe inonzi yakaiswa parutivi kuti ishandiswe nevarwere veCovid-19 munyika yose.
Zimbabwe, iyo ine vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nemashanu, ine vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 vanosvika chiuru nezana nemakumi manomwe nevasere zvichivera kushaya kwevanhu gumi nevasere nemusi weChishanu.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi rebazi rezvehutano, sezvo mutevedzeri wegurukota rezvehutano, Dr John Mangwiro, vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo.
Asi mutungamiri weZimbabwe Nurses Association, Va Enoch Dongo, vanoti vakoti vari kumanikidzwa kushanda vakapfeka masiki imwe chete zuva rose izvo zviri kuisa hupenyu hwavo nevarwere panjodzi.
VaDongo vanoti hurumende inofanirwa kumboisa zvimwe zvirongwa zvayo parutivi yokoshesa dambudziko reCovid-19 kuitira kuti pave nemari yakakwana yekutenga zvikwanisiro zvinosanganisira mamasiki, ventilators kuti zvinge zviri muzvipatara.
RBZ Yofumura Makambani Anonzi Ari Kuita Huori, Asi Mitengo Inoramba Ichikwira
Vanomirira Masangano eMitambo Vokumbira Hurumende Kuti Vadzoke Munhandare
Vakawanda Votadza Kutevedzera Mitemo Yakaturwa naVaChiwenga yeKudzivirira Kupararira kweCovid-19
Mutemo weCovid-19 Unorambidza Kufambafamba kweVanhu Wonzi Unokanganisa Makambani, Vashandi neVanhuwo Zvavo
Bazi rezveHutano Roshushikana neHuwandu hweVana Vasati Vabva Zera Vobata paMuviri